लिच्छविकालदेखि नै हामीकहाँ संयुक्त परिवारको संरचनागत व्यवस्था प्रचलनमा थियो । संयुक्त परिवारभित्रको सम्पत्ति पनि संयुक्त स्वामित्वमा राखिएको हुन्थ्यो । यस्तो बृहत् परिवारको प्रमुखमा परिवारको ज्येष्ठतम व्यक्तिलाई मान्ने सिद्धान्त प्रायः कृषिप्रधान समाजमा पाइन्छ । सबै पारिवारिक मामिलामा यस्तो ज्येष्ठ कुल सदस्यको निर्णायक भूमिका रहिआएको देखिन्छ । विभिन्न नेवारी गुठीमा अचेल पनि प्रचलनमा रहेको थकालीले यही सामूहिक परिवारको प्रमुखत्व ज्येष्ठ कुल पुरुषले निर्वाह गर्ने परम्पराको निरन्तरता वहन गरेको देखिन्छ । गुठी प्रथाको उत्पत्ति र विकास यसरी संयुक्त मूल परिवारको विकसित रूपमा प्रकट भएको लख काट्न सकिन्छ (शर्मा, उही, पृ. ४६) । आज पनि एउटा गुठीको घेराभित्र उही टोलमा बस्ने विजातीय परिवारलाई समावेश गरिन्न । उही सजातीय व्यक्तिले पनि भिन्न टोल या ठाउँमा गएर त्यहाँ क्रियाशील उही सजातीय गुठीको सदस्यता पाउन सक्दैन । त्यसका लागि अनेक प्रक्रियाकोखुट्किलो पार गर्नुपर्छ ।
गुठीको सदस्य हुनु नेवार समुदायमा त्यस परिवारको सामाजिकीकरणको सबैभन्दा अनिवार्य कार्यका रूपमा लिइन्छ । नेवारी समाजलाई गुठीले त्यसरी नै बाँधेको छ, जसरी नसाको एउटा जालोले शरीरलाई बाँधेको हुन्छ । नसाका माध्यमबाट शरीरको सम्पूर्ण भागमा रक्तप्रणालीद्वारा जीवनशक्तिलाई सञ्चालित गरेझैं नेवारी समाजलाई पनि गुठीले अनुप्राणित गरेको पाइन्छ (शर्मा, उही, पृ. ४५) ।
गुठी नेवारी समाजद्वारा आविष्कृत आधारभूत जीवन पद्धति अवश्य हो, तर आज गुठी निश्चित जात या सम्प्रदायमा मात्रै सीमित छैन, न त काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै । नेवारहरूकै स्तरमा नभए पनि जीवनको अनिवार्य हिस्साका रूपमा खसहरूमा समेत गुठी संस्कृति अभिसारित भएको पाइन्छ । यसका अलावा तमाम नेपाली समुदायलाई गुठी संस्कृतिले कुनै न कुनै तवरले संगठित गरेको छ । आफ्ना गोत्रचि≈नका बन्धुबान्धवका साथ एकत्रित हुने र सामूहिक आमोद–प्रमोद र भेटघाटका साथै सामूहिक विधि–विधानबाट परिचालितहुने परम्परा नहुने नेपाली समाजको कुनै पनि जातजाति छैन ।
कसरी पहाडका खेतीयोग्य जमिन अन्य जातिबाट खोसियो, दलितहरूलाई भूमिबाट बेदखल गरियो र निश्चित जातिलाई मात्रै भूमिपति बनाउने काम गरियो, तथ्यहरू निफने बुझिहालिन्छ । महेन्द्रकालीन समयपछि आज फेरि एक पटकगुठीका नाममा रहेको सम्पत्तिबाट सरोकारवालालाई निकालेर नयाँ ‘कमैया’ बनाउने र वफादारहरूलाई पुस्ता–दरपुस्तादेखि चलिआएका गुठीको ‘दर्तावाल सरकारी साहू’ बनाउने काम प्रस्तावित विधेयकले गर्नेछ ।
नेपाली समाजको स्वत्वमाथि सत्तासीनहरूको स्वार्थको एसिड छ्यापेर सरोकारवाला समुदायलाई कुल, भूमि, रीति, संस्कृति र परम्पराबाट बेदखल गर्ने योजनाका साथ गुठीको जग्गालाई नयाँ ‘बालुवाटार’ बनाएर त्यसको स्वामित्व अनेक प्रपञ्च मिलाएर नयाँ ‘विष्णु पौडेल’हरूलाई हस्तगत गर्ने सत्तासीनहरूको गुरुयोजना खुलेरै आएको छ ।